चाइनाले वाल्टम्यानको बम हतार गर्ने आरोपको जवाफ दिए, अन्त्येष्टि दुर्घटनामा परेन (भिडियो) - Wwe
चाइनाले वाल्टम्यानको बम हतार गर्ने आरोपको जवाफ दिए, अन्त्येष्टि दुर्घटनामा परेन (भिडियो)
चाइना भन्छिन् कि उनलाई पाइपरको अन्त्येष्टिमा आमन्त्रित गरिएको थियो र वाल्टम्यानले सुझाव दिए अनुसार यो दुर्घटनामा परेन
चाइना र ट्रिपल एच दुबै रोडी पाइपरको अन्तिम संस्कारमा उपस्थित थिए, डेव मेल्ट्जर कुश्ती अवलोकनकर्ता न्यूजलेटर मा रिपोर्ट। उनीहरु एक घण्टा को लागी एउटै कोठा मा थिए र एक पटक कहिल्यै बोलेनन् । यो वर्ष मा पहिलो पटक थियो कि पूर्व जोडी एउटै कोठा मा सँगै भएको थियो। यो असाध्यै अप्ठ्यारो हुने थियो, यो देखी कि चीनाले भर्खरै ट्रिपल एच लाई उनीहरुको उथलपुथल सम्बन्ध को दौरान माथी हिर्काएको आरोप लगाईयो। उनले ती आरोपहरुको कडा रुपमा इन्कार गरे कि मिडिया को माध्यम बाट बयान जारी गर्दै ती दावीहरुलाई अस्वीकार गर्न को लागी बिगत केहि महिनाहरुमा दुई अलग अलग अवसरहरुमा। पाइपरको अन्त्येष्टि पोर्टल्याण्ड, ओरेगन मा 8/11 मा भयो।
जबकि डेभ Meltzer कुश्ती अवलोकनकर्ता न्यूजलेटर को नवीनतम किस्त मा उल्लेख गरीयो कि उनीहरु एक घण्टा मा कहिल्यै बोलेनन् कि उनीहरु एउटै कोठा मा थिए, सीन वाल्टम्यान (जो धेरै जसो X-Pac वा Syxx को नामले चिनिन्छ) अन्यथा भन्नेछन्। वाल्टम्यानले दाबी गरे कि उनीहरु बोले पछि चीनाले ट्रिपल एचलाई माफी माग्ने प्रयास गरी उनीहरु सँगै हुँदा उनीहरुले उसलाई पछाडि प्रहार गरे भन्दै माफी माग्ने प्रयास गरे। उनले ट्विटरमा निम्न लेखे:
उनी उसलाई केहि पटक भेट्न सक्छिन् र तपाइँ बिल्कुल सही हुनुहुन्छ। उनी हंटरलाई हतारिन् र भनिन् 'सबै कुराको लागि माफ गर्नुहोस्!' दयनीय।
उनले यो पनि दावी गरे कि चाइना अन्त्येष्टिमा दुर्घटना भयो। जे होस् उनले पछि आफ्नो दावीहरु मा त्याग गरे, जब उनले थाहा पाए कि उनी वास्तव मा सेवा को लागी आमन्त्रित गरीएको थियो। उनले लेखे कि उनी उनीहरुको ईतिहास को कारण सुरक्षा द्वारा तल लिईएको धेरै नजिक थियो। चाइनाले आफ्नो तर्फबाट वाल्टम्यानको दाबीको जवाफ दिँदै निम्न भिडियो जारी गरे। कुनै न कुनै तरिका आफ्नो आँसु समातेर शान्त बनाए, उनले भनिन् कि उनी कसै संग आफ्नो सम्बन्ध को औचित्य साबित गर्न आवश्यक छैन, र त्यो पाइपर एक दशक को लागी एक प्रिय साथी भएको थियो। ट्रिपल एच को साथ कथित घटना लाई सम्बोधन गर्दै, उनले स्वीकार गरे कि उनलाई थाहा थिएन कि ट्रिपल एच अन्तिम संस्कार मा हुनेछ। जब सबैजना आफ्नो अन्तिम श्रद्धांजलि दिइरहेका थिए, पूर्व दम्पती अजीब रुपमा आमनेसामने भएको थियो। उनले भनिन् कि उनी शान्तपूर्वक उसलाई अँगालो हाले र उनको कानमा फुसफुसाए कि उनी विगतका टिप्पणीहरु को लागी कसरी माफी चाहन्छन्।
मैले उसको कानमा फुसफुसाएँ कि कती गहिरो खेद छ कि म भावनात्मक कष्टमा मैले भनेका कुराहरु को लागी छु, चीनाले भनिन्। सबै चीजहरु संग म गएको छु, मलाई थाहा छ यो बुझ्न को लागी हो, तर मलाई थाहा छ यो जायज छैन। म उसलाई भन्न चाहन्छु, मेरो लागी। त्यहाँ कुनै झगडा थिएन, कुनै सुरक्षा थिएन। यो दुई व्यक्तिहरु को बीच एक कोमल पल थियो जो एक पटक एक अर्का को ख्याल राख्छन् र [एक] हराएको साथी मा दुखी छन्
यहाँ भिडियो छ:
म अचानक किन यति भावुक छु
तपाइँ पूर्व फिर्ता चाहनुहुन्छ संकेत
जब तपाइँ खराब दिनमा हुनुहुन्छ
केविन ओ लेरी नेट वर्थ के हो?
मेरो पतिले मलाई आफ्नो मालकिनको लागी छोडिदिए